Bilihii la soo dhaafey ayaa jaaliyda ddsi ee Melbourne Australi waxa ka dhexe aloosna kala qaabsanan iyo burbur u horseeday sumcad xumo iyo wadashaqa
Bilihii la soo dhaafey ayaa jaaliyda ddsi ee Melbourne Australi waxa ka dhexe aloosna kala qaabsanan iyo burbur u horseeday sumcad xumo iyo wadashaqayn la aan jaaliyada dhexededa ah. Arinkas oo uu eedeede leeyahay Abdiqani fahar.
Si kastaba ha ahaatee Cabdiqani Farah Yussuf, kadib markii uu Madaxweynahah ddsi mudane Abdi Mahamud Cumar u soo magaacey godoonka jaaliyada DDIS ayuu kagabay in uu buuxiyo kaalintii loo soo igmaday;
Community ddsi markii aay u aqoonsatey in uu yahay, Gudoomiyaha jaaliyada si toos ah ayay u la shaqee yeen jaaliyda oo fulinaysa amrka dowlda iyo xisbiga barakaysan waxayna ka codsatey in uu soo buuxiyo kaalintiisa, la isuna keeno dhamaan Community, Gudoomiyahu wuxu ka war wareegey midnimada iyo dhisma Jaaliyada waxaa uu bilaabey in uu koox koox u kula saaro hadaba koox shiriyo kala qabiileeyo magacayo u kalaxiyo;
Waxa kaloo waxa lalayaabo ah oo uu caadaystay Abdiqani in uu magaca xisbiga iyo madaxawayna ah ugu hanjabo ama u goodiyo jaaliyada oo uu adeegsado eryada ah waa amar xisbi waa waxayabah layaabka lehe oo uu qafkasta is waydiinaya;
Hadaan nahay bahada saxaafada waxan rabnaa in aan bulshada u cadaayno arimah halkaan ku xusnay iyo ku wakale oo ku dabajira maalmahaan soo socoda;